Kuzoshuba kakhulu emdlalweni wodumo | IOL Isolezwe
Kuzoshuba kakhulu emdlalweni wodumo
Isolezwe / 19 April 2017, 12:00pm / NOKUBONGWA PHENYANE
UKHAYA Dladla, olingisa indawo kaGC emdlalweni Uzalo sekuvele ukuthi kuzoshuba uma kutheleka abazali bakhe kulo mdlalo bezomshadisa njengoba bengazi ukuthi uyisitabane eThekwini
NGESIKHATHI abomdlalo Uzalo benesithangami nabezindaba ngeledlule, baveza okuningi okuzoheha ababukeli njengoba kuqala isizini yesithathu. Isithangami sabo besiseMhlanga, eThekwini, lapho okuvele ukuthi kuningi okuzoqhamuka okusha nokudala obekufihliwe okuzohlala obala maduze.
U-GC, okuyindawo elingiswa uKhaya Dladla, kuvele ukuthi indawo yakhe izomangaza abaningi maduze uma sekufika abazali bakhe bezombona elokishini KwaMashu lapho ehlala khona.
Okuzogqama ngokufika kwabazali bakhe wukuthi abazi ukuthi uyisitabane njengoba ekhaya ahamba bengazi.
Echaza ngokuzokwenzeka kuGC, uKhaya uthe ngesikhathi ehamba ekhaya eza eThekwini, waphuma abazali bakhe bengasoli lutho ngaye.
“Kuzomangala abangani bakhe uma sekufika abazali bakhe uGC, ashintshe indlela agqoka naziphatha ngayo,” kuchaza uKhaya.
Uthe uGC kuzoba sengathi wehlelwa yifu elimnyama uma ebona abazali bakhe betheleka engabalindele.
“Abazali bakhe abazi nhlobo ukuthi uyisitabane futhi nabangani bakhe abazi ukuthi ekhaya kubo akwaziwa ukuthi uphila mpiloni eThekwini, konke kuzohlala obala uma sekukhona abazali bakhe,” kuchaza uKhaya.
Uthe abazali bakhe bazomhlalisa kanzima uGC, njengoba ezozama ukufihlela bona nabangani bakhe baKwaMashu impilo yakhe yasemakhaya.
“Uyise kaGC, emakhaya uyinduna yenkosi ngakho maduze kudingeka ashade nendodakazi yenkosi yingakho abazali bakhe bezifikele bezokhuluma naye eThekwini. Uzama ngakho konke * -GC ukufihla impilo yakhe ukuze ajabulise uyise kakhulu kodwa kusenjalo noJojo ukhona futhi umnakile.” Uthe uGC uba ngaphansi kwengcindezi njengoba efuna ukujabulisa uyise kodwa futhi uyamphoxa uma esenqaba ukushada owesifazane akhethelwe yena.
Uqhube wathi lokhu kwenza umndeni wakhe umlaxaze, aphinde alahlekelwe nanguJojo.
“Konke lokhu kuyamkhathaza kakhulu uGC njengoba ezithola engenakhaya futhi kancane kancane ugcina esengena ophuzweni oludakayo,” kuchaza uKhaya.
Omunye umlingisi okuzobonakala izinkinga zimlandela, wuNosipho okuyindawo edlalwa wuNompilo Maphumulo.
Le ntokazi kuyimanje kulo mdlalo kubonakala ingene shi ezinkingeni ngemuva kokuthandana no-Amos osekugcine emphendule umqwayizi futhi usebhema nezidakamizwa.
Maduze le ntokazi izophuma kulolu bishi njengoba unina ezokwazi ukuyithola lapho evaleleke khona.
UNosipho ukuthola kunzima ukubhekana nempilo abeyiphila, ukhetha ukungamnaki uMondli okuyisoka lakhe kodwa uzithola esethanda uQhabanga (Siyabonga Shibe).
Ukuzihlanganisa noQhabanga kuzomfaka kwezinye futhi izinkinga njengoba engazi ukuthi uzifaka kolunye utaku lokuthandana nomuntu oyisigebengu yize eyiphoyisa.
Ababhali balo mdlalo nabakhiqizi bawo bathembise lukhulu oluzayo kulo mdlalo.